I Holland | Fandraisana | Siansa momba ny tabletting
Momba ny Holland
Punches & maty
Fitaovana fitantanana ny fitaovana
Olana amin'ny famokarana
Vidiny hazakazaka avo
Fianarana momba ny raharaha sy lahatsoratra
Forms fangatahana fangatahana
Fanambarana I Holland Covid-19
Amin'ny maha mpamatsy voatokana ho an'ny indostrian'ny pharmaceutika manerantany, tianay ny manome toky indray ny mpanjifanay sy ny mpiara-miasa fa 100% nanolo-tena ny hanao ny zava-drehetra araka ny herinay izahay hanohanana ny orinasanao sy ny ady amin'ny COVID-19.
Fantatsika sy mirehareha fa mitana ny anjara toerana lehibe ataontsika amin'izao fotoan-tsarotra izao. Misaotra betsaka ny mpiasanay, sy mpiara-miasa aminy amin'ny indostrian'ny pharmaceutika amin'ny asa rehetra ataon'izy ireo hanohanana ny fitsaboana an'io aretina io.
Azafady tsindrio eto raha hijery ny fanambarantsika feno.
Tongasoa eto I Holland
Eto amin'ny I Holland dia nanao totohondry sy maty nandritra ny 75 taona mahery izahay ary nahatonga anay ho mpanamboatra fitaovana famatrarana takelaka lava indrindra eto an-tany. Ny mampiavaka antsika amin'ireo mpanamboatra fitaovana takelaka hafa dia ny fomba tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, fampandrosoana ary fandefasana ny tetikasanao manokana. Hiara-hiasa aminao izahay amin'ny dingana rehetra, manomboka amin'ny hevitra voalohany momba ny takelaka vaovao ka hatramin'ny famahana ny olana misy ny vokatra. Ny totohondry sy ny maty tsirairay izay amboarintsika dia namboarina. Tsy manome fitaovana avy amin'ny tahiry izahay.
Ny tanjonay indrindra dia ny fampitomboana ny vokatrao sy fanatsarana ny fahombiazan'ny zavamaniry amin'ny ankapobeny. Azontsika atao izany;
1. Ilay manampahaizana famolavolana ekipa manampy anao hamorona tablety manome fahafaham-po ny soatoavinao amin'ny marika fa manamaivana ny olan'ny famokarana.
2.Mandrindra tsara takelaka voafaritra toy ny fahamaotinana, lanja ary ny hatevita dia tratrarina sy notazonina.
3. Manamaivana ny fotoana fijanonanao amin'ny alàlan'ny fanesorana olana famokarana mahazatra - mifikitra, manentsina ary mametaka amin'ny hafa.
4. Fampihenana ny saram-pandraisana isaky ny takelaka miaraka amin'ny fiainana fitaovana lava kokoa ary fikojakojana ny fitaovana matihanina.
5. mizara ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika amin'ny alalàn'ny be dia be fanofanana sy fanohanana teknika.
Izany rehetra izany, rehefa miaraka amin'ny hafainganam-pandehantsika ny valin-kafatra, dia manolotra traikefa amin'ny serivisy iray tsy mitovitovy amin'izany amin'ny orinasa.
Voahangy tonga lafatra arakaraka
Haingam-pandeha ary mora ny manadihady. Kitiho ny rohy eto ambany hanombohana fanaovana takelaka tsara kokoa androany.
Ilay ParmaGrade® isan-karazany ny steels dia mahavita mandanjalanja tsara toetra. Manome faharetana sy famokarana vokatra izany, manome fahombiazana mahomby amin'ny fitaovana fampiasan-doha.
PharmaCote® dia karazana fitsaboana sy palitao izay manatsara ny fahaizan'ny PharmaGrade® fitaovana vy ho an'ny totohondry ary maty.
Ao amin'ny I Holland izahay dia mahatsikaritra ny maha-zava-dehibe ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa sy ireo mpiara-miasa siantifika. Manampy amin'ny fampandrosoana ny vokatra manavao, matanjaka ary mifaninana izany.
I Holland dia manana traikefa 70 taona mahery amin'ny famahana ireo olana famokarana takelaka. Mino izahay fa hiara-miasa amin'ny mpanjifantsika mba hampita ny fahalalana ananantsika.
Vaovao farany sy fisehoan-javatra
I Holland dia manambara andian-dahatsoratra webinar vaovao momba ny fikolokoloana fitaovana ho an'ny 2021
Tsy miafina izany! Fitaovana voatahiry tsara sy voatahiry tsara no ahazoana vola. Hatsarao ny fiverenanao amin'ny famatsiam-bola amin'ity andiany webinar ity izay hanazavana ny antony marina. Hatao amin'ny alakamisy farany isam-bolana febolay - aog 2021.
Fahombiazana lehibe ho an'ny fampianarana troubleshooting voalohany an-tserasera - Nov 2020
I Holland dia nampiantrano ny laharam-pahamehana voalohany momba ny famokarana tablette an-tserasera tamin'ny novambra 2020. Miambina hatrany ny olon-drehetra nefa tsy miatrika loza mety hivezivezy. Noho ny fahombiazan'ny hetsika dia hanohy handray ny ankamaroan'ny fampianarana an-tserasera tsy tapaka i I Holland.
Series Webinar maimaim-poana - Fikojakojana ny fitaovanao - Lubricate & Store - 29 Jolay 2021
Tsy miafina izany! Fitaovana voatahiry tsara sy voatahiry tsara no ahazoana vola. Hatsarao ny fiverenanao amin'ny famatsiam-bola amin'ity andiany webinar ity izay hanazavana ny antony marina.
Voalohany, diovy ny fitaovanao!
Fitsipika momba ny tsiambaratelo | © Copyright I Holland Ltd 2019